Kooxdayada - AfricArXiv
Xubnaha kooxda 'AfricanArXiv' waa dad xirfadlayaal ah oo leh asallo kala duwan isla markaana khibrad u leh dhinacyo kala duwan oo quseeya tacliinta Sare iyo Cilmi baarista Afrika.
Ma jeceshahay inaad ku biirto kooxda AfricanArXiv? Nala soo xiriir oo noo soo sheeg sida aad wax ugu biirin karto.
Su'aalaha guud fadlan iimayl ku soo dir info@africarxiv.org.
Jaamacadda Farsamada ee Kenya [ORCID]
Injineerka softiweerka ah iyo cilmi baadhe ee tikniyoolajiyadda soo socda oo ay kujiraan isku dhafnaan macquul ah iyo xaqiiqooyin laxiriira, aaladaha blockchain, iyo dareemayaasha tayada hawada hooseeya.
Jaamacadda Ibadan, Nigeria, [ORCID]
Jaamacadda Khartoum, Sudan [ORCID]
Student of daawo, cilmi baadhe, ganacsade iyo u dooda furfurnaanta cilmi baarista, xogta, iyo waxbarashada. Waxaan xiiseynayey in la dhiso dhaqanka cilmi baarista furan ee Afrika oo leh aaminaad adag oo ku saabsan kala duwanaanta iyo ku darista. Aasaasaha ururka 'Open Sudan', oo ah olole u doodis qaran oo furan. Wuxuu sidoo kale ku jiraa guddiga fulinta ee SPARC Africa, oo lataliye u ah Fur Khariidadaha Aqoonta iyo guddiga agaasimayaasha ee Xoog.
Xarunta Cilmi-baarista Caafimaadka (Genetics) iyo Xarunta Cilmi-baarista Daawada (GRMCR) ee Jaamacadda Putra Malaysia (UPM) iyo Machadka Genetanka ee Malaysia (MGI)ORCID]
Ardayga PhD ee ka shaqeeya cilmiga dadka, kana shaqeeya cilmi baaris aasaasi ah iyo tarjumid ku saleysan sameynta daweyn lala beegsado kansarka kaadiheysta bini’aadamka iyadoo la adeegsanayo teknoolojiyad is daba marinta sare.
Deeqaha Dijital ah ee Afrika, Associate Research, Jaamacadda Stellenbosch, Koonfur Afrika [ORCID]
Waxay maamushaa waaxda Adeegyada Maktabadda Dijital ah ee Maktabadaha UCT waxayna had iyo jeer ilaalisaa shaqooyin fara badan oo madax bannaan oo madax bannaan, oo ay ku jiraan muxaadaro ku saabsan aragtida iyo hadalka farshaxanka iyo daraasadaha muhiimka ah ee jaamacadaha Western Cape, iyagoo siinaya aqoon isweydaarsiyo fiidiyoow, cod iyo sawir qaadis ah, qorista dib u eegista, isagoo soo bandhigaya farshaxankiisa sawir qaadista ah, isla markaana u garaacaya sida durbaan garaac. Niklas wuxuu haystaa MA (FA) iyo BA (Hons) oo ka socda UCT, sidoo kale wuxuu BA ku qaatay waxbarashada Jaamacadda Cologne.
Maamulaha Mashruuca Caafimaadka, Isbitaalka Jaamacadda ee Würzburg
Iyadu waa xamaasad, cilmi-yaqaanno luqado badan ku hadla oo leh 10 + sano oo khibrad u leh cilmiga bayoolojiga, farmasiga iyo neerfaha. Waxay horumarisay khibrad adag oo ku saabsan cilmiga caafimaadka iyo neerfaha ee caalamiga ah. Ka sokow shaqadeeda cilmi-baarista, Carine waxay ku hawlan tahay wacyigelinta sayniska iyo kobcinta awoodda sayniska ee Afrika. Kaqeybgalkaani wuxuu ujeedkiisu yahay fududeynta fursadaha barashada edbinta, gudbinta aqoonta iyo iskaashiga caalamiga ah si loo wanaajiyo tayada barista sayniska iyo cilmi baarista ee Afrika. ”
Xarunta Tababarka ee Xiriirka - TCC Afrika, Kenya
Kevina meelaha ay xiiseyneyso waxaa ka mid ah cilmi baarista & horumarinta, ilaha aadanaha, sayniska xogta iyo sayniska furan. Waxay higsaneysaa inay ka gudubto oo ay bixiso xalal abuuraya qiime iyo waayo-aragnimo madadaalo goobta shaqada oo umuuqata mid soo noqnoqota oo aad u badan
La-tashiga Codsiyada EMEA, Masar
Isbadalka Dijitaalka ah ee Hogaamiyaha Lataliyaha / Sayniska Xogta, Injineer Cilmi baaris & Horumarineed, Maskax Maamulaha Maamulaha iyo Maamulaha Barnaamijka Lean-Agile.
AfrikArXiv xiriiriyaha aasaasaha, IGDORE, Biin [ORCID]
Soosaaraha WordPress oo leh taariikh ku saabsan tirakoobyo la adeegsaday iyo xiiso weyn oo ku saabsan arrimaha marin-u-helka furan ee Afrika iyo sidoo kale baahinta aqoonta iyo habka loo adeegsado qaaradda.
Maxamed V University & Xasan II Machadka Cilmiga Cilmiga Beerista iyo Caafimaadka Xoolaha, Rabat, MarookoORCID]
Ardayga darajada PhD ee Neuroscience
Maxamuud M Ibrahim
Uniklinik RWTH Aachen, Jarmalka & Masar
Nidaamyada cilmi baarista cilmiga bayoolajiga, iyadoo la adeegsanayo barashada mashiinka si loo dhiso moodallo saadaalin ah oo ka mid ah nidaamyada bayoolajiga ee laga soo qaado xogta sare, gaar ahaan isku xirnaanta xogta. Iminka ka shaqeynta fahamka cudurka isku darka xogta bukaan-socodka iyo bukaan-eegtada. Horey uga shaqeyn jiray warshadaha Bayoolaji iyo Cilmiga Cilmi baarista.
Maamulaha at Dhalinyarada Jabulani ee Isbedelka (JAY4T), Kenya
Bayoolaji iyo isuduwaha sayniska ee xiisaha u qaba cilmiga Bayoolajiga wuxuuna fududeeyaa barnaamij dhowrista deegaanka.
Xiriiriyaha iyo CTO-da Vilsquare.org, Nigeria
Maamulaha mashruuca iyo cilmibaare qaybaha sida caafimaadka, waxbarashada, dhismaha, sharciga, xirfadaha, waxsoosaarka, iyo amniga & ilaalinta.
Barnaamijka Ka Hortagga Kansarka Qaranka - Nigeria, Jaamacadda Ibadan - Nigeria [ORCID]
Olabode waa nin dhalinyaro ah oo reer Nigeria ah oo xiise gaar ah u leh inuu arko Afrika riyadeena. Wuxuu aaminsan yahay "caafimaadku waa maal" Si aad si fiican ugu noolaato, waa inaad fiicnaataa. Wuxuu haystaa shahaadada MSc iyo BSc maadada Biochemistry (Cancer Research and Molecular Biology).
Wuxuu rajaynayaa fursado si looga faa’iideysto iskaashigeyga, cilmi baarista, hoggaaminta iyo xirfadaha farsamo. ”
Jaamacadda Alexandria, Masar
Biochemist oo raacaya shahaadada MSc ee Neuroscience iyo Biotechnology oo leh asal farsamo oo ku saabsan cilmiga bayoolojiga iyo dhaqanka unugyada asliga ah.
Aasaasaha OpenCider, Jarmalka [ORCID]
Sara waa aasaasaha OpenCider iyo Hoggaamiyaha Kooxda Maareynta Macluumaadka Cilmi-baarista ee xarunteedu tahay Berlin. Waxay horey uga soo shaqeysay sidii keydiyaha keydka cilmiga sayniska ee European European Molecular Biology Laboratories (EMBL) -EBI iyo EMBO oo ay ku qaadatay shahaadada PhD ee cilmi baarista kansarka ee Jaamacadda Bern, Switzerland. Iyadu waa u doodaha xoogan ee dhismaha bulshada iyo kor u qaadista haweenka iyo kooxaha aan loo baahnayn ee ku jira beeraha STEM.
Jaamacadda West Virginia, USA [ORCID]
Arday PhD leh sanado dhawr ah oo waayo-aragnimo warshad sida cilmi saynisyahano ah. Daraasaddiisa waxay diiradda saareysaa dhaqaalaha deegaanka, waarta, dhaqaalaha deegaanka, iyo aragtida garaafka.
AfrikArXiv xiriiriyaha aasaasaha, Helitaanka 2 Muuqaal', IGDORE, Jarmalka & Kenya [ORCID]
Tababaraha iyo la-taliyaha Xiriirka Sayniska Furan iyo Maareynta Mashruuca Sayniska. Iyada oo diirada la saarayo aaladaha dhijitaalka ah ee sayniska iyo calaamadeeda ', waxay ujeedkeedu yahay xoojinta Cilmi baarista qaaradda Afrika iyada oo loo marayo Sayniska furan.
Agaasimaha Fulinta, Pivot Waxbarashada Caalamiga ah Kooxda La-tashiga
Maxamuud Bukar Maina
Saaxiibka Postdoctoral ee Jaamacadda Sussex [ORCID]
Agaasimaha Fulinta, Xarunta tababarka ee Isgaarsiinta (TCC-Afrika)
Hoggaaminta Ka Qaybgalka ORCID [ORCID]
Jaamacadda Washington & Furan Furan Nigeria
Jaamacadda Oxford (Boqortooyada Ingiriiska), Jaamacadda Witwaterrand (RSA) iyo IGDORE [ORCID]
Under Microscope-ka Founder